Chelsea ayaa afgembi u riday rajadii Real Madrid kadib markii ay 2-0 uga badisay ciyaar ka… – Hagaag.com
Chelsea ayaa afgembi u riday rajadii Real Madrid kadib markii ay 2-0 uga badisay ciyaar ka…
Posted on 6 Maajo 2021 by Admin in Sports // 0 Comments
Kooxda reer England ee Chelsea ayaa u soo baxday finalka UEFA Champions League, ka dib markii ay 2-0 kaga badisay Real Madrid lugtii labaad ee semi-finalka Arbacadii, si ay ula kulanto kooxda kale ee Ingriiska ka dhisan Manchester City ciyaarta ugu dambeysa ee tartanka.
Chelsea ayaa wadar ahaan ku badisay 3-1, madaama ay barbaro 1-1 ah ay kula soo gashay Real Madrid lugtii hore oo ka dhacday caasimada Spain ee Madrid.
Stamford Bridge, Timo Werner ayaa hogaanka u dhiibay Chelsea daqiiqadii 28aad oo weerar uu hogaaminayay Ngolo Kante markii uu baas qurux badan siiyey Kai Havertz, kaasoo si kalsooni leh u dul marsiiyey kubada goolhayaha Real Madrid Courtois, laakiin waxay ka soo laabatay diilinta ganaaxa kadibna Werner ayaa dhameystiray.
Chelsea ayaa afgembi u riday rajadii Real Madrid markii ay dhalisay goolkii labaad oo isla Kante abuuray fursadaasi, markii uu kubada u dhiibay Christian Pulisic, kaasoo karoos uu u gudbiyey Mason Mount daqiiqadii 85aad daba mariyey goolhayaha Real Madrid. Kante ayaa loo aqoonsaday laacibka kulankaasi.
Guushan Chelsea ayaa ah in (markii saddexaad u soo baxday) waxayna ciyaarta kama dambeysta Champions League la ciyaari doontaa kooxda isku Ingriis yihiin ee Manchester City (oo markii ugu horreysay u soo baxday finalka), finalkan ayaa noqonaya Ingriis saafi ah markii saddexaad ee taariikhda tartanka, iyo tan labaad 3-dii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay.
Xiriirka Kubadda Cagta ee Yurub (UEFA) ayaa xaqiijiyay dhammaadkii bishii hore in finalka Champions League lagu qaban doono sida qorshuhu yahay dalka Turkiga, in kasta oo cudurka Covid-19 uu ku badan yahay.
UEFA ayaa ku sheegtay warbixin ay siisay British Press khamiistii la soo dhaafay in “finalka Champions League lagu qaban doono magaalada Istanbul 29ka May, oo ay la socon doonaan tiro kooban oo daawadayaal ah, waxaana ku kalsoonahay in xiritaanka ku meelgaarka ah uu ku egyahay 17-ka bishan ma jiri doono wax Saamayn ah uu ku yeelanayo ciyaarta.”
Real Madrid ayaa ah kooxda ugu badan ee ku guuleysatay Champions League, iyadoo leh 13 jeer, marka loo eego hal horyaal oo ay Chelsea ku guuleysatay 2012 oo ay ka qaaday Bayern Munich.
Chelsea ayaana guuldarro ka soo gaadhay finalkii European Championship 2008 oo kooxda Manchester United ku garaacday, 5-6 oo rigoorayaal ahaa.